Dongguan Baolai Metal Can Co., Ltd, niorina tamin'ny taona 2012, dia iray amin'ireo malaza tinplate fonosana fitoeran mpanamboatra ao Shina. Mpandray entana dia: fihinana & simika menaka Can, boribory,-joro sy ny karazana kapoaka, feno karazana sy specifications.Our orinasa manana mafy R & D sy ny teknolojia hery, nandroso fitaovana, manana vondrona ambony matihanina sy ara-teknika personnel.Has 12 nandroso fitaovana famokarana andalana nafarana avy any Alemaina, Japon, Taiwan sy ny firenena hafa, ary 150.000 ㎡ atrikasa sy ny fahaiza famokarana isan'andro mihoatra ny 100.000 pcs.
Amin'ny maha-avo amin'ny teknolojia orinasa, maty izahay, nametraka fametrahana mazava tsara ny fikarohana sy ny fampandrosoana, mpanamboatra sy marina tsara foana nohitsakitsahiko, fametrahana mazava tsara fiangonana any one.Products efa nahazo SGS, Intertek, ISO 9001/14001, LFGB, sns certification.Through mihoatra noho ny folo taona Nifanesy koa ny ezaka, efa nahazo voninahitra maro sy mari-pankasitrahana, ary nahazo ny anaram-boninahitra misesy ny "nandroso orinasa ao Guangdong Province", sns.
Amin'ny tombony ny Harder kalitao & manjavozavo, & tsara famehezana & foodgrade & manohitra ny harafesiny & anti-harafesina. Tinplate afaka manome rafitra airtight isolates tanteraka ny tontolo iainana izay anton-javatra afa-tsy heat.Based amin'ny fitantanana ny fitsipika iraisam-pirenena momba ny tontolo iainana ISO-14000, tinplate am-bifotsy amin'ny ambany ny fandotoana, sy ny harena recyclable-toetra mamonjy hanana toerana malalaka kokoa ny fampandrosoana ho an'ny hoavy fonosana fangatahana.
Tin Bucket , Tin fitoeran-javatra , solika Tin Can , Sakafo kapoaka , Tin Box , Tin kapoaka ,